စိတ်ညစ်တဲ့အခါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စိတ်ညစ်တဲ့အခါ
Posted by manawphyulay on Jan 7, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary, Poetry, Short Story | 12 comments
ခုတစ်လော ဘာမှ မလုပ်ချင် မကိုင်ချင်၊ အလုပ်မှာလည်း မပျော်…. စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာ ဘာကို ဘယ်လို ခေါ်လည်းဆိုတာတောင် ပြန်စဉ်းစားရပြီ။ စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာတောင် မညည်းတွားချင်တော့ဘူး။ ကိုယ့်ကြောင့်လည်း သူများတွေ စိတ်မညစ်စေချင်ဘူး။ ပျော်နေတယ်လို့ ထင်နေတာလား။ စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတဲ့စကား မပြောချင်ပါဘူး။ အပြုံးရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ စိတ်မချမ်းသာမှုတွေ အများကြီး ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာ မြင်မှမမြင်ကြတာကိုး……. ပြောကြတယ်။ ခုတစ်လော ပြုံးပြုံးနေပါလားတဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်မက သူများတွေမတူတာတစ်ချက်က အရမ်းစိတ်ညစ်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် နည်းနည်းစိတ်ညစ်ရင်ပဲ ပြုံးနေတတ်တာ ကျွန်မအကျင့်ပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်မ အကြောင်းသိတဲ့သူတွေက သူ ပြုံးနေပြီ သတိထားတဲ့။ တချို့ကလည်း ပြုံးတော့ ပြုံးတဲ့ ပြုံးဖြဲဖြဲ မလုပ်နဲ့တဲ့။ ကျွန်မ ဘ၀ကို အရှုံးပေးတဲ့သူ မဖြစ်ချင်ဘူး။ လောကဓံကို အပြုံးနဲ့ ကြံ့ကြံ့ခံမယ်လို့ လုပ်ထားခဲ့မိတာ။ ကျွန်မရဲ့ညီမလေးတွေက ပြောဖူးတယ်။ အမတဲ့ ဘ၀မှာ ဘာလိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာတွေပဲ ကြုံကြုံ အပြုံးမပျက်ပဲ အသက်ကြီးတဲ့ထိ နေနိုင်ရမယ်တဲ့။ ဘ၀ဆိုတာ ပြောသလောက် မလွယ်ပါဘူး။ ပြောတော့သာ လွယ်တာ တကယ် နေထိုင်ကြည့်တော့ တော်တော်ကို မလွယ်တာကို တွေ့ရတယ်။ ခုတော့ တစ်ယောက်ထဲနေရတာ ပိုပြီး စိတ်ချမ်းသာမယ်ထင်လို့ ဘယ်သူမှလည်း စကားမပြောဘူး။ ပြောလည်းမပြောချင်ဘူး။ ခုတော့ ပြုံးတော့ ပြုံးနေတယ် မချိပြုံးပဲ ဖြစ်ဖြစ်နေတော့တယ်…. ဆိုက်လည်း မလုပ်တော့ဘူးလို့ စဉ်းစားထားတယ်။ နေနိုင်သရွေ့နေကြည့်ဦးမယ်လေ….. ပြဿနာဆိုတာ အဖြေတော့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြေရှင်းလို့ရတာနဲ့ မရတာပဲကွာတယ်။ စိတ်ချမ်းသာမှုကို ငွေနဲ့ဝယ်လို့ရမယ်ထင်သလား။ ကျွန်မတော့ မထင်ဘူး။ ပထမတော့ ကျွန်မ မရေးချင်ပါဘူး။ ကျွန်မကြောင့် လာလည်တဲ့ မောင်နှမတွေ စိတ်မညစ်စေချင်ဘူးလေ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ စိတ်ထွက်ပေါက်ဟာ ဒီနေရာပဲရှိပါတယ်။ ဘယ်သူမဆို စိတ်ညစ်တာကို ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဘာကြောင့်ညစ်လည်း အဖြေရှာတော့ အဖြေတော့ တွေ့ပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် ဖြေရှင်းခွင့်မရှိဘူး။ တစ်ချိန်ချိန်တော့ ပြီးသွားမှာပါလို့ပဲ စိတ်က ဖြေမိတယ်။ အင်း ဘာမှမပြောတော့ဘူးနော်။ စိတ်ညစ်ပြီး ပြန်သွားပြီလား…. အားလုံးအဆင်ပြေပါစေနော်….
စိတ်ညစ်နေရင် ဆပ်ပြာမှုန့်ကောင်းကောင်းနဲ့ လျှော်လိုက် …
49 yr old female says:
တချိူ့စိက်ညစ်စရာဆိုတာတွေဟာ အချိန်ကာလတစ်ခုကို ဖြတ်သန်းပြီးသွားလို့ ပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့အခါ ပြောပလောက်စရာ မဟုတ်တဲ့ ကိစ်စ ကလေးတွေ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်၊ အချိန်က စကားပြောသွားမှာပါ၊ ဒါ့ကြောင့် ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်မညစ်ပါနဲ့၊
စိတ်ညစ်လို့ လာဖတ်ပါတယ် မနောဖြူနဲ့တွေ့နေတယ် ..စကားပုံပြောင်းမလားလို့
စိတ်မညစ်ပါနဲ့..မနောဖြူ….စိတ်ညစ်စရာဆိုတာ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်…အရမ်းစိတ်ညစ်နေပြီဆိုရင် ကျွန်တော်သုံးတဲ့နည်းလေးသုံးကြည့်ပါလား…သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရယ်စရာအကြောင်းများပြောလိုက်ပါ၊စိတ်သက်သာရာရောက်သွားမှာပါ၊တစ်ကိုယ်တည်းအေးအေးဆေးဆေး နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ တရားမှတ်ပြီးနေကြည့်လိုက်ပါ၊စိတ်ချမ်းသာမူပိုရမှာပါ။
သောကကင်းဝေးနေနိုင်ရေးစာအုပ်မှာ ဖတ်ဘူးတယ်။ အခက်အခဲနဲ့ ကြုံလာတဲ့အခါ နောက်ဆုံး အဆိုးဆုံးကို စဉ်းစားလိုက်ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ။ သေနိုင်လား၊ ထောင်ကျနိုင်လား။ အလုပ်ပြုတ်နိုင်လား။ အဆိုးဆုံးကို ကြိုတွေးပြီး ပြင်ဆင်ထားလိုက်ရင် စိတ်အနည်းငယ်ပေါ့သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ထက်ဆိုးစရာမှ မရှိတော့ဘဲ။
သောကကင်းဝေးနေနိုင်ရေးစာအုပ်မှာ ဖတ်ဘူးတယ်။ အခက်အခဲနဲ့ ကြုံလာတဲ့အခါ နောက်ဆုံး အဆိုးဆုံးကို စဉ်းစားလိုက်ပါ။ ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ။ သေနိုင်လား၊ ထောင်ကျနိုင်လား။ အလုပ်ပြုတ်နိုင်လား။ အဆိုးဆုံးကို ကြိုတွေးပြီး ပြင်ဆင်ထားလိုက်ရင် စိတ်အနည်းငယ်ပေါ့သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ထက်ဆိုးစရာမှ မရှိတော့ဘဲ။
တစ်ကယ်တော့ ကျွန်တော်က ဆိတ်ပညာနဲ့ဘွဲရထားတာဗျ
ဘွဲ့ ရဆို ကျွန်တော့်အဘက ဆိတ်တွေမွေးတယ်လေ
ဆိတ်သားသားလေးတွေကို အငတ်ထား ဆိတ်မကြီးကိုနို့ ညှစ်ပြီး ရေရောပြီးရောင်းတဲ့ဖော်မြူလာနည်းတွေ ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ အောင်ပုက ထိပ်တန်း
(ဘဒ္ဒ န္တတွေ အမြင်နဲ့ ဆို အ ကုသိုလ်တွေပေါ့ဗျာ)
စိတ်ရဲ့ ဖြစ်တည်ခြင်းအမျိုးမည်တွေကို အမျိုးစားသတ်မှတ်ပေးရရင် အားလုံးရွာလည်ကုန်မှာဆိုးလို့ မပြောတော့ပါဘူး
စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာရဲ့ ဆို့ စ်က တစ်စုံတစ်ခုအပေါ်မှာ အလိုမကျခြင်းပေါ့ဗျာ ( အန်ဆဲ့တစ်စ်ဖိုင်းဆဲလ်ဖ်)
တစ်ကယ်တော့ အမှန်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ်အလိုမကြတာဗျ
အလိုမကျခြင်းဆိုတာက ကျေနပ်စရာ အကြောင်းတွေမှာ မေ့လျှော့နေခဲ့လိုဘဲ
ကျေနပ်လို့ သာယာနေတာက လောဘ
အလိုမကျဖြစ်ပြီး မကျေနပ်တာက ဒေါသ
အဲ့ထက်ဆိုးတာက ဘာဖြစ်မှန်း မသိဘူး (ဘာကို အလိုမကျဖြစ်နေမှန်းမသိဘူး ခမဲလိုနေသလိုလိုဘာလိုလို ဘာလိုလို ) အဲ့ဒါအဆိုးဆုံးဘဲ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာဖြစ်မှန်းမသိတာက မေဟ
ဆိတ်ကော်လော်ဂျီနည်းတွေထဲက တစ်ခုသောနည်းအရ အာရုံတွေကိုပြောင်းလဲပေးရတယ်
ဦးခေါင်းမှာ ရှိတဲ့ နာ့ဗ်တွေရဲ့ လုပ်ရှားမှုကို လေ့ကျင့်ပေးရတယ်
အလွန်လွယ်တဲ့နည်းက သီချင်းကျယ်ကျယ် အော်ဆိုရတယ်
ဒါမှမဟုတ်ရင် အခန်းထဲမှာ အသကုန် အသံဗြဲကြီးနဲ့ အော်ပေတော့ ဒါက လောကီနည်း
လောကုတ္တရာနည်းအရကတော့ ကိုယ်လဲ ဘဒ္ဒ န္တတွေထဲက ဘဒ္ဒ န္တ တစ်ယောက်မို့ဝင်ရင်ဝင်တယ် ထွက်ရင်ထွက်တယ် မှတ်
နောက်မှ ဆက်ရေးတော့မယ် မန်နေဂျာလာနေပြီ အဲ့ကောင် ကွိုင်
အခုတောင် ခရီးထွက်တုန်း လမ်းလုံး အလှအပ ပိုစ်မျိုးစုံ ပေးပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ကင်မရာ ပျောက်သွားလို့.. ပုံတွေလည်း ပါသွားပြီ။ ဟတ်ထိနေတာ.. နှလုံးခုန်နှုန်းတွေ နှေးနှေးလာတယ်.. စိတ်မကောင်းလွန်းလို့.. အဟင့်.. ကင်မရာက ဟိုတလောကမှ.. ၅၀၀ ကျော်ပေးပြီး ၀ယ်ထားတာ.. ၅၀၀တန်လေး အတွက် နှမျော တသ.. ပုံကလေးတွေ အတွက်လည်း ၀မ်းနည်းပက်လက်.. ပျော်တော့ဘူး.. ညစ်တယ် အားကြီး ညစ်တယ်။
မိုက်ကယ်ဂျော်နီဝေါ့ကားရဲ့ စကားတွေက စိတ်ညစ်မှုကို ခဏပြေပျောက်စေပြီး မဝေကတော့ သူလည်း ခံစားဖူးတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း စိတ်ညစ်တဲ့အခါ ဖူဂျီသောက်လိုက်ရင် ပျောက်တယ်ဆိုတာ သိနေသလိုလိုနဲ့ အားပေးနေတယ်။ ဆူးကတော့ တစ်ခုထဲသော အရာအတွက် ညစ်တဲ့စိတ်ကို ဖြေဖျောက်နိုင်ပါစေနော်…..
ဆူး စိတ်ညစ်တာ ထက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်တာပါ။ စိတ်သိပ်ပင်ပန်းလွန်းအားကြီးရင် အရမ်း အိပ်ချင်တယ်။ နေ့လည်က တရေးအိပ်ပြီးသွားလို့.. စိတ်ညစ်တာတောင် သက်သာသွားပြီ။ အိမ်က လူတွေကတော့.. နဲနဲ ပိုပြင်းထန်တယ် ဟတ်ထိတာ.. အခုထိ မျက်နှာ မကောင်းကြသေးဘူး။
ဒါကတော့ ဆူးရယ် သင်ခန်းစာလည်း ရသွားတာပေါ့ ဘယ်သူမပြု မိမိမှုလေ……….. ဘယ်သွားသွား ဂရုစိုက်ရမယ်ဆိုတာ ပညာထပ်ရပြီး ပိုဂရုစိုက်မိတာပေါ့နော်…………. မနောဆို ဆွဲကြိုး ပျောက်ဖူးတုန်းကလည်း ဒီလိုပဲ မအိပ်နိင်မစားနိုင်တာတောင်ဖြစ်မိတာ………. နောက်မှ ပစ္စည်းသင်္ခါရပေါ့ ဆိုပြီး ဖေဖေက ပြောလို့ စိတ်သက်သာရာရတာ။
အရာအားလုံး သတ္တ၀ါအားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေ